Aragtidiisa Finalka Champions League, In Uu Wali Neymar Kula Jiro Whatsapp Group, In Cristiano Ronaldo Uu U Darsaday Iyo Waxyaabo Badan Oo Uu Lionel Messi Ka Hadlay. - Gool24.Net
Aragtidiisa Finalka Champions League, In Uu Wali Neymar Kula Jiro Whatsapp Group, In Cristiano Ronaldo Uu U Darsaday Iyo Waxyaabo Badan Oo Uu Lionel Messi Ka Hadlay.
Lionel Messi oo xulka qarankiisa Argentina kula qaadanaya diyaar garowga Copa America ayaa bixiyay waraysi xiiso badan oo uu waxyaabo badan kaga hadlay.
Lionel Messi ayaa shaaca ka qaaday in uu Neymar Jr iyo Lius Suarez kula jiro Whatsapp group kaas oo ay samaysteen waqti hore waxayna arintani muujisay in wali ay Messi iyo Neymar Jr xidhiidh toos ah leeyihiin.
Hadalka Lionel Messi ayaa dabka ku sii shidaya wararkii dhawaan soo baxay ee sheegayay in Neymar Jr uu doonayo in uu xagaagan ku soo laabto Barcelona isla markaana uu Messi u sheegay qorshihiisa.
Dhinaca kale Lionel Messi ayaa wax laga waydiiyay finalka Chamions League ee caawa dhex mari doona kooxaha Liverpool iyo Tottenham isaga oo dib u xusuustay qaladaadkii ay kulankii Liverpool sameeyeen.
Waxa kale oo uu Lionel Messi ka hadlay sida uu horyaalka La Liga, kooxda Real Madrid iyo waliba isaga laftiisu ay ugu darsadeen joogitaankii Cristiano Ronaldo ee Spain.
Haddaba shabakada Gool24 ayaa halkan idiinku soo koobtay qodobadii ugu muhiimsanaa ee uu Lionel Messi ka hadlay ama wax laga waydiiyay halkan ayaanad kaga bogan kartaa.
Lionel Messi oo qiraya in ay wali xidhidh leeyihiin Neymar Jr ayaa yidhi: “Anigu waxaan leeyahay Whatsapp group kaas oo ay ku jiraan Suarez, Neymar iyo anigu. Neymar waa cajiib, waxaanu sii wadnaa in aanu wada hadalno. Magaca guruubku waa ‘The Three Sudacas'”.
Lionel Messi oo Suarez ka difaacaya eedayntii loo soo jeediyay ayaa yidhi: “Dadku waxay bilaabeen in ay si xumaan ah diirada u saaraan Suarez sababtoo ah in uu isagu qaliin maray, waxa uu xanuun la soo dhibtoonayay wati dheer, manuu haysan doorasho kale”.
Intaas kadib Lionel Messi ayaa qiray in isaga, La Liga iyo Real Madrid ay u darsadeen joogtaankii Cristiano Ronaldo ee Spain wuxuuna yidhi: ” La Liga oo kaliya umuu darsan Cristiano, aniga ayaa sidoo kale u darsaday, waxa uu Real Madrid a dhigayay kuwo aad u muhiimsan”.
SIDOO KALE AKHRISO: LABADAN Ciyaartoy Ee Arsenal Ka Tirsan Ayaa Kulankii Shalay Ee Burnley Kooxdooda U Ekaysiiyay Mid U Qalanta Inay Usoo Baxdo Champions League.
Lionel Messi oo ka hadlaya hamigiisii markii uu kubbada cagta bilaabay ayaa yidhi: “Markii aan bilaabay kubbada cagta, waxay markaastaba riyadaydu ahayd in aan kooxda qaran Argentina gaadho”.
“Waxaan doonayaa in aan waayahayga ciyaareed dhamaysto aniga oo wax kula guulaystay kooxda qaranka. Ciyaaraha ka fadhiisto? Maalinta aan in ka badan ku raaxaysan waayo kubbada cagta, waan joojinayaa” ayuu Messi hadalkiisa raaciyay.
Lionel Messi ayaa shaaciyay in wiilkiisa Thiago uu dhibtoodo marka ay guuldaro soo gaadho aabihii waxa kale oo uu ka hadlay jacaylkiisii carruurnimo ee Antonela in uu ahaa mid aragtida kowaad ku bilawday.
Lionel Messi oo arimahan ka hadlaya ayaa yidhi: “Jacaylka Antonela waxa uu ahaa aragtidii kowaad. Thiago waxa uu in badan dhibtoodaa marka aanu guuldaraysano. Waxay dhacday kulankii Liverpool iyo finalkii Copa Del Rey”.
Miyuu Lionel Messi tababare noqon doonaa? Isaga oo ka jawaabaya ayuu yidhi: “Anigu naftayda uma arko ka tababare ahaan. Pep waxa uu aniga ii ahaa tababare khaas ah. Waan ku celinayaa, anigu naftayda uma arko ka tababare ahaan, laakiin haddii aan mid noqon lahaa, waxay noqon lahayd ciyaartoyda da’yarta ah”.
Ugu danbayn Messi oo ka hadlaya ceebtii Liverpool ka soo gaadhay iyo aragtidiisa finalka Champions Leauge ayaa yidhi: “Wixii Liverpool ka dhacay ceeb ayuu ahaa, qaladaad doqoniimo ah ayaanu samaynay. Waxa uu finalka u dhexeeya Liverpool iyo Tottenham noqon doonaa mid aad u dheeli tiran”.